ဂျော်ဂျီယာမြင်းစီးနိုင်ငံကောင်းဘွိုင် Cowgirl CHAP PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ – အဆိုပါ Tailoress
နေအိမ် / အမြိုးသမီးမြား / အဝတ်အစား / ဂျော်ဂျီယာမြင်းစီးနိုင်ငံကောင်းဘွိုင် Cowgirl CHAP PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
categories: အဝတ်အစား, ဘောင်းဘီရှည်, အမြိုးသမီးမြား
Can be made withafleece lining or without. Both legs open fully down the outside seam with open ended zips. Adjustable back fastening withasnap buckle. Available in 8 အရွယ်အစား.
Copyshop အရွယ်အစား: 98cm x 75cm